Ukutyhila uhlaselo lobugrogrisi eLebhanon? Isikhululo senqwelomoya sasePort kunye neBeirut
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Ukutyhila uhlaselo lobugrogrisi eLebhanon? Isikhululo senqwelomoya sasePort kunye neBeirut
isikhululo • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zaseLebhanon zokuPhula • iindaba • Safety • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Uhlaselo lobugrogrisi lunokwenzeka eLebhanon.
Uqhushumbo olukhulu lwashukumisa ikomkhulu laseLebhanon iBeirut lonzakalisa abantu abaninzi laza ladala nomonakalo omkhulu. Ukuqhuma kwabonakala kugxile kwizibuko laseBeirut kwaye kwaphuka iifestile ezikude.
Igosa laseLebanon Red Cross lithi amakhulu abantu abonzakeleyo kuqhushumbo lwaseBeirut, kubandakanya abafileyo nabenzakeleyo. Ngokuka-AP, inani labantu abaswelekileyo belingaziwa kwangoko, kodwa emva kweeyure, ii-ambulensi bezisahamba nabo benzakeleyo, kwaye amagosa athi izibhedlele zaseBeirut zigcwele. Iihelikopta zomkhosi zanceda ekulweni imililo eyayihlasela ezibukweni.
Kukho umonakalo ochazwe kwi Beirut Isikhululo senqwelomoya ngenxa yokuqhuma okwenzeke ezibukweni.
Umthombo wolu dubulo kuthiwa "ngumlilo omkhulu" kwindawo yokugcina abantu abacima umlilo kufutshane BeirutIzibuko.
Imithombo ithi: Kwakungekho ngenxa yeyunithi yokugcina izinto zomlilo. Kwakukho iindawo ezi-2 ezahlukileyo zokuqhushumisa oku yayikukuhlaselwa kweLebhanon.
Itwitter yathi: Nceda usithandazele olu dubulo lwenzeke nje ngoku kwilizwe lam laseLebhanon. Bathe into kwi-steamship yaqhuma into enkulu kwaye abantu abaninzi benzakala kwaye basweleka kwaye izindlu ezininzi zatshatyalaliswa !!! Ndiyakhala! Nceda usithandazele! Kwakukhulu kakhulu.
Enye i-tweet ithe: Kuselithuba kakhulu ukuba sazi ukuba yintoni kanye kanye ebangele oko kuqhuma, kodwa ngokucacileyo ubomi babantu abamsulwa balahlekile.
UAbbas Ibrahim, intloko yoKhuseleko Jikelele eLebhanon, uxelele oonondaba bendawo ukuba "izinto eziqhushumbe kakhulu" ezithinjiwe ngaphambili zigcinwe kule ndawo.
Ukuqhuma okukhulu eBeirut, eLebhanon kwenzeke nje. Lo asingomboniso bhanyabhanya. Kwenzekile. Le vidiyo yokuqhuma kwii-angles ezahlukeneyo ze-7. Thandazela iLebhanon
Jonga umsonto ukunceda
--Elive.ng (@eliveblog) Agasti 4, 2020
Ingxelo ye-AP, yokuba u-Abbas Ibrahim, inkosi yoKhuseleko Jikelele lase-Lebanese, uthe kusenokwenzeka ukuba kubangelwe yinto enesiqhushumbisi esathathwa kwinqanawa ixesha elidlulileyo kwaye yagcinwa kwizibuko. Umjelo kamabonakude wasekhaya we-LBC uthe loo nto yayiyi-nitrate yesodium.
Igosa laseburhulumenteni lakwa-Israeli lithe u-Israyeli "akananto yakwenza" nolu dubulo. Uthethe nje ngegama lakhe lokungachazwa kuba ebengagunyaziswanga ukuxoxa lo mbandela noonondaba. Amagosa akwa-Israeli ahlala engathethi nto "kwiingxelo zangaphandle."